Dad shacab ah oo lagu xir-xiray Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Dad shacab ah oo lagu xir-xiray Dhuusamareeb
Ciidamada Booliska magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa xabsiga utaxaabay dad shacab ahaa oo isku soo baxay kuwaasoo dhammaantood la xiray.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxaa isku soo baxay dad shacab ah oo u badnaa haween ka careysan dagaal beeleedyo maalintii afaraad ka socda degaanka Xananbuuro kaasoo aan weli lakala dhex galin.
Dadka ay xir-xireen ciidamada ayaa ku qeylinayay in si deg-deg ah loo kala dhex galo dadka walaalaha ah ee ku dagallamaya degaanka Xananbuuro oo maalmahanba isku hor-fadhiyay halkaas. Madaxda dowladda ugu sareysa iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa ku shirsan magaalada Dhuusamareeb, waxaana aad loo adkeeyay ammaanka magaalada Dhuusamareeb.
Ciidamada Booliska ayaa xir-xiray dadkii isugu soo xoomay barxadda hore ee Saldhigga magaalada Dhuusamareeb, ma jiro wax wara oo ay maamulka degmada dhuusamareeb kasoo saareen dagaallada kasoo cusboonaaday degaanka Xananbuuro, sidoo kale dadka la xir-xiray ayaan la ogeyn ujeedada ka dambeysa xarigooda, mar haddii ay dalbanayaan in lakala dhex galo dagaalada ka socda degaanka Xananbuuro oo hoos taga magaalada Dhuusamareeb.